စိတ်ဝင်စားစရာ မာမာရဲ့ ဝါသနာများ: August 2014
ဒီနေ့တော့ ကြက်သားကော်ပြန့်လိပ်ကြော်လေးကြော်ပါမယ် ၀က်သားအစားကြက်သားနဲ့ကြော်တာပါ ၀က်သားဆိုရင် မာမာတို့အိမ်မှာ လူမညီပါဘူး မစားတဲ့သူကများတဲ့အတွက် ကြက်သားနဲ့ဘဲကြော်တာပါ။
စိတ်ဝင်စားလို့ကြော်စားကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ ကော်ပြန့်ရွက် ၇ရွက်အတွက် လိုအပ်တာလေးတွေ ပြောပါမယ်။
ကြိတ်စက်ဖြင့်ညက်နေအောင်ကြိတ်ထားသော ကြက်ရင်ပုံသား - 200 g
ကော်ပြန့်ရွက် - ၇ရွက်
အနေတော်လှီးထားသော တရုတ်နံနံ - တရုတ်ဟင်းပြင်ပန်းကန်အသေး တစ်လုံးစာ
အနေတော်လှီးထားသော ကြက်သွန်မိတ်ပင် - တရုတ်ဟင်းပြင်ပန်းကန် တစ်လုံးစာ
ခပ်နုတ်နုတ်လှီးထားသော ကြက်သွန်နီ - တရုတ်ဟင်းပြင်ပန်းကန် တစ်လုံးစာ
Cornflour - ထမင်းစားဇွန်း တစ်ဇွန်းခွဲ ( ကြက်သားမှာနယ်ထားပေးပါ )
ငရုတ်ကောင်းမှုန့် - လက်ဖက်ရည်ဇွန်း တစ်ဝက်မရှိတရှိ
အစာကြော်ပြီး လိပ်ရန်နှင့် ဂျုံအရည်ဖျော်ရန်
ဆီကို မီးအပူပေးပြီး ကြက်သွန်နီကို အရင်ကြော်ပါ
နွမ်းလာပါက ကြက်သားကိုထဲ့ပြီး ဆား အရသာမှုန့် ပဲငံပြာရည် ငရုတ်ကောင်းမှုန့်တို့ထဲ့ပြီး ၆မိနစ်လောက်ကြော်ပေးပါ
အသားအရောင်ပြောင်းလာပြီး မာလာတာနဲ့ ကြက်သွန်မိတ် တရုတ်နံနံတို့ထဲ့ပြီး၂မိနစ်လောက် မွှေပေးပါ ကျက်သွားရင် အအေးခံထားပါ
ကော်ပြန့်ရွက်လိပ်ပြီး ထိပ်စကိုကပ်ရန် ဂျုံထမင်းစားဇွန်း တစ်ဇွန်းသာသာကို ရေထမင်းစားဇွန်း ၂ဇွန်းနဲ့ ဖျော်ထားပါ
ကော်ပြန့်ရွက်ကိုထောင့်ချွန်းခင်းပြီး ထောင့်ချွန်းအပေါ်မှာ အစာကိုထမင်းစားဇွန်း ၂ဇွန်းကျောာကျော်ထဲ့ပါ
ထောင့်ချွန်းဖက်မှ စပြီးလိပ်ပေးပြီး ဘေး၂ဖက်ကိုခေါက်ပြီး ဆက်လိပ်ပေးပါ
အလိပ်ဆုံးကာနီးမှာ ဖျော်ထားသော ဂျုံအရည်စွတ်ပြီး လိပ်လိုက်ပါ
ကြက်ဥကြီးကြီး - တစ်လုံး
အကြော်မှုန့်- ထမင်းစားဇွန်း ၅ဇွန်း
ရေ. - ထမင်းစားဇွန်း ၂ဇွန်းတို့နဲ့ အားလုံးကျေအောင်ဖျော်ထားပါ
ဆီကိုအပူပေးပြီး ဆီပူလာပါက မီးကိုအလယ်အလတ်လောက်လျော့ပြီးမှ ကြက်သားလိပ်ကို ဖျော်ထားသော အပြင်အကာခွံအတွက်စပ်ထားသော အနှစ်ထဲမှာလူးပြီး ဆီအိုးထဲသို့ တစ်လိပ်ခြင်းနှစ်ပေးပြီး ထဲ့ကြော်ပေးပါ
တစ်ဖက်ကျက်ရင်တစ်ဖက်ကို လှန်ပေးပြီး၂ဖက်လုံးရွှေဝါရောင်သန်းပြီး ကြွတ်ရွလာလျှင် ဆယ်ပြီးဆီစစ်ထားပေးပါ
Chili sauce ထမင်းစားဇွန်း နှစ်ဇွန်း
ငရုတ်သီးအလှော်မှုန့် ထမင်းစားဇွန်း တစ်ဇွန်း
သကြား ထမင်းစားဇွန်း တစ်ဇွန်း
အနေတော်လှီးထားသော နံနံပင် အပင်ကြီးကြီး သုံးပင်
မညက်တညက်ထောင်းထားသော ကြက်သွန်ဖြူ အမွှာကြီးကြီး ၇မွှာ
ရေ ထမင်းစားဇွန်း ၅ဇွန်း အားလုံးရောပြီး ဖျော်ပေးပါ
Posted by Tuumar at 1:03 pm No comments:
Labels: အကြော်စုံ စားဖွယ်ရာများ
ကြက်သား ဆန်လှော် ဆန်ပြုပ်
ဒီနေ့ပြုပ်သောက်ဖြစ်တဲ့ ဆန်လှော်ဆန်ပြုပ်လေးပါ ရိုးရိုးဆန်ပြုပ်ထက် ပိုပြီးသောက်လို့ကောင်းသလို ဆန်လှော်မွှေးမွှေးလေးကြောင့် သောက်ရတာတဲ့ ဆန်လှော်အနံ့လေးကလဲ စွဲမက်စရာပါ ရိုးရိုးဆန်ပြုပ်လို ပျစ်ခဲခဲကြီးမနေဘဲ ဆန်စေ့လေးတွေက ပြုပ်ပြီးသည့်တိုင် ခပ်ကျဲကျဲလေးနဲ့ကျက်တဲ့ ဆန်လှော်ဆန်ပြုပ်လေးပါ။
မာမာတို့တော့ မိသားစု၃ယောက် တစ်နေကုန် ဆာရင်ဆာသလိုသောက်နိုင်ဖို့ ထမင်းပေါင်းအိုး ဆန်ချင်ဗူး၂ဗူးကို လှော်ပြီးပြုပ်ထားတဲ့ နည်းလေး မျှဝေလိုက်ပါတယ်
ရေဆေးပြီးရေမထဲ့ဘဲ ညိုတဲ့ထိလှော်ထားသောဆန် - ထမင်းပေါင်းအိုးဆန်ချင်ဗူး ၂ဗူး
အသားလေးတွေကို လက်သည်းခွံသာသာ လှီးထားသောကြက်သား - ၁၅ကျပ်သား
အခွံခွာပြီးရေဆေးထားသော ကြက်သွန်နီ - ဥအသေး ၁၀လုံး
ဆား - လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၃ဇွန်းးခွဲ
နနွင်းမှုန့်- လက်ဖက်ရည်ဇွန်း သုံးပုံပုံ
ပါးပါးလှီးထားသောကြက်သွန်နီ - အနေတော် တဥ
ဓါးပြားရိုက်ထားသော ကြက်သွန်ဖြူ - အမွှာကြီးကြီး၂မွှာ
ပါးပါးလှီးထားသောကြက်သွန်မိတ် - အပင်ကြီးကြီး ၃ပင်
အရသာမှုန့် - လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၃ဇွန်း
မညက်တညက်ထောင်းထားသော ကြက်သွန်ဖြူ - အမွှာကြီးကြီး၎မွှာ
ထောင်းထားသောငရုတ်ကောင်းမှုန့် - လက်ဖက်ရည်ဇွန်း တ၀က်သာသာ
လှော်ထားသောဆန်ကို ရေများများထဲ့ပြီး နူးအောင်ပြုပ်ပါ
ဆန်ပြုပ်နေတုံး ဆီကို နနွင်းမှုန့်ထဲ့ကာ အပူပေးပြီး လှီးထားသောကြက်သွန်နီ ဓါးပြားရိုက်ထားသော ကြက်သွန်ဖြူတို့ကို ဆီသတ်ပါ
ကြက်သွန်များပျော့ပြီး မွှေးလာပါက ကြက်သား ဆားလက်ဖက်ရည်ဇွန်းတ၀က် အရသာမှုန့်လက်ဖက်ရည်ဇွန်း တဇွန်းတို့ထဲ့ပြီး ၅မိနစ်လောက် ဆီသတ်ပေးထားပါ
ဆန်နူးပြီဆိုပါက ရေကိုတရုတ်ဟင်းပြင်ပန်းကန် ၆လုံးစာလောက်ထဲ့ပေးပြီး ကြက်သွန်ဥလေးများနှင့် ကြက်သားဆီသတ်ကို ထဲ့ပြုပ်ပေးပါ
လိုအပ်သော အရသာပြင်ပေးပြီး ကြက်သွန်ဥလေးများနူးလာပါက ထောင်းထားသော ကြက်သွန်ဖြူ ငရုတ်ကောင်းတို့ကိုထဲ့ပြီး မီးနွေးနွေးနဲ့ထားပြီး လိုသလောက်ထဲ့သောက်ကာ သောက်ကာနီးမှ ကြက်သွန်မိတ်ဖြူးပြီးသောက်နိူင်ပါပြီ။
Posted by Tuumar at 7:41 pm No comments:
Labels: ဆန်ပြုပ် စားဖွယ်ရာများ
စားသုံးသူအားလုံးနှစ်သက်မယ်လို့ထင်ပါတယ် ဒီဟင်းကတော့ မာမာအရမ်းကြိုက်တဲ့ဟင်းလေးပါ ဂဏန်းဆိုရင် လယ်ဂဏန်း ပင်လယ်ဂဏန်း ချောင်းဂဏန်းအကုန်ကြိုက်ပါတယ်။
ဂဏန်းကိုချက်တော့မယ်ဆိုရင် မချက်ခင်သူ့ကိုအရင်ဆုံး အပြင်ခွံတွေပြောင်အောင်ဆေးရပါတယ် ပြီးတော့ အခွံကိုခွာ အခွံမှာကပ်နေတဲ့ အဆီတွေကို ပန်းကန်တစ်ခုမှာ ထဲ့ထားပေးပါ ခွာလိုက်တဲ့အသားခြမ်းမှာကပ်နေတဲ့ ပါးဟပ်ကလေးတွေကို ဖယ်ပြစ်ရပါတယ် အဲဒီပါးဟပ်လေးတွေကို စားမိရင်ဗိုက်နာတတ်ပါတယ်။
အခုချက်ထားတဲ့ဂဏန်းဟင်းက မြန်မာပြည်ခနပြန်တုံး ချက်ထားတာလေးပါ ဒီမှာဂဏန်းကဈေးကြီးလွန်းလို့ ချက်စားခဲပါတယ် ဂဏန်းအရသာကိုထိမ်းတာက ချင်းနဲ့မဆလာမို့ ထဲ့ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်။
ပါးဟပ်ဖက်အခြမ်းမှာကပ်နေတဲ့ အစာလမ်းကြောင်းကိုလဲဖယ်ပေးပါ သန့်စင်သွားပြီဆိုရင်တော့ ချက်ဖို့ပြင်ပါမယ်။
ရေဆေးသန့်စင်ပြီး အခွံချွတ်ထားသောဂဏန်းအကောင်ကြီးကြီး - ၆ကောင်
ငရုတ်သီးအရောင်တင်မှုန့် - လက်ဖက်ရည်ဇွန်းမောက်မောက် တဇွန်း
ငံပြာရည် - ထမင်းစားဇွန်း တဇွန်းခွဲ
ညက်နေအောင်ထောင်းထားသော ကြက်သွန်နီ - အနေတော် တဥ
ညက်နေအောင်ထောင်းထားသော ကြက်သွန်ဖြူ - အမွှာကြီးကြီး ၃မွှာ
ညက်နေအောင်ထောင်းထားသော ချင်း - တစ်လက်မမရှိတရှိ
ဟင်းချိုမှုန့် - လက်ဖက်ရည်ဇွန်း တ၀က်
မကျီးအနှစ် - ထမင်းစားဇွန်း တ၀က်သာသာ
ဆီ - လက်ဖက်ရည်အကြမ်းပန်းကန် တ၀က်သာသာ
ဂဏန်းအသားကိုမချက်ခင် ဆား နနွင်း ငံပြာရည် ဟင်းချိုမှုန့် မဆလာတို့နဲ့ဆယ်မိနစ်လောက်ကြိုပြီးနယ်ထားပေးပါ
မဆလာကို အသားမှာနယ်ပြီးဆီသတ်ပါက ပိုပြီးမွှေးကြိုင်စေပါတယ်
ဆီပူလာတာနဲ့ထောင်းထားသော ကြက်သွန်ဖြူ နီ ချင်းတို့ကို ငရုတ်သီးနဲ့အတူဆီသတ်ပါ
ငရုတ်သီးနံ့သင်းလာတာနဲ့ အရသာနယ်ထားသော ဂဏန်းကိုထဲ့ပြီးဆီသတ်ပေးပါ
ဖယ်ထားသော ဂဏန်းဆီကိုထဲ့ပြီး ဆီဆက်သတ်ပေးပါ
ရေခမ်းကာနီးပြီဆိုရင် မကျီးအနှစ်ကိုထဲ့မွှေပြီး ရေနဲနဲထပ်ထဲ့ကာ ဆီပြန်အောင်တည်ပေးပါ
ချင်း မဆလာနံ့မွှေးမွှေးလေးနဲ့ ဂဏန်းချဉ်စပ်ဟင်းလေးရပါပြီ။
Posted by Tuumar at 11:11 am3comments:
အာလူးခြစ်ကြော် ကြော်နည်းလေးပြောပြပါမယ် ကြော်ရတာလွယ်သလောက် စားလို့တော့အရမ်းကောင်း ပါတယ် မာမာ့ကလေးတွေက အာလူးကြိုက်တော့ မကြာမကြာဆိုသလိုလဲကြော်ကျွေးဖြစ်ပါတယ် အာလူးနံ့မွှေးမွှေးလေးနဲ့ဝါးလိုက်ရင်ရွရွလေးမို့ မာမာ့မိတ်ဆွေတွေလဲနှစ်သက်မယ်ထင်ပါတယ်။
အခွံခွာပြီးအလုံးလိုက် ရေစင်အောင်ဆေးကာ အသီးခြစ်သော ခြစ်ခပ်ကြမ်းကြမ်းနှင့် ခြစ်ထားသောအာလူး - 500g
ဆိုဒါ - လက်ဖက်ရည်ဇွန်း တ၀က်မရှိတရှိ
တန်ပူရာအကြော်မှုန့် - ထမင်းစားဇွန်း ၂ဇွန်းမောက်မောက်
ညက်နေအောင်ထောင်းပြီး အရည်ယူထားသောချင်း - လက်တဆစ်သာသာ
ငရုတ်ကောင်းမှုန့် - လက်ဖက်ရည်ဇွန်း တ၀က်မရှိတရှိ
အားလုံးကို ဇလုံတစ်လုံးမှာထဲ့ပြီး ခပ်ဖွဖွလေးနယ်ပေးထားပါ
မကပ်တဲ့ဒယ်အိုးတစ်လုံးကိုအပူပေးပါ ပူလာပါက မီးရှိန်နဲနဲလျှော့ပြီး ဆီလက်ဖက်ရည်အကြမ်း ပန်းကန်နှစ်လုံးစာလောက်ထဲ့ပေးပါ
ဆီပူလာပြီးကျက်လာပါက အရသာနယ်ထားသော အာလူးခြစ်ကို အနေတော်ယူကာ အသာအရာ ဆုတ်ပြီး ဆီအိုးထဲထဲ့ပေးပါ
အာလူးယူစဉ် ပါလာသောအရည်များကို ညှစ်မချပြစ်ဘဲ ဒီအတိုင်းအာလူးဆုတ်ကို ထဲ့ကြော်ပေးပါ
မီးအရမ်းမများစေရန် သတိထားပါ တစ်ဖက်ရွှေဝါရောင်းသန်းလာပါက နောက်တစ်ဖက်ကို လှန်ပြီးကြော်ပေးပါ
နှစ်ဖက်လုံး ရွှေဝါရောင်သန်းလာရင် ဆယ်ပြီးဆီစစ်ပေးပါ
ဆီစစ်သွားပါက အရသာရှိသော အာလူးခြစ်ကြော်မွှေးမွှေး စိမ့်စိမ့်ရွရွလေးကို သုံးဆောင်နိူင်ပါပြီ။
Posted by Tuumar at 10:30 am No comments:
ငါးမြင်း ဆီကျန်ရေကျန် အချဉ်ဟင်း
ဒီနေ့ချက်ဖြစ်တဲ့ ငါးဟင်းလေးပါ ငါးမြင်းဟင်းက စားလို့ကောင်းတဲ့ ငါးအမျိုးအစားထဲမှာ ပါပါတယ် ချက်တတ်ဖို့ဘဲလိုပါတယ် ငါးအသားက ထူတဲ့အတွက် ဆီသတ်တာနိုင်ရပါမယ် ဆီသတ်တာမနိုင်ရင် စားလို့မကောင်းဘဲ ပွစိစိနဲ့ဖြစ်နေတတ်ပါတယ် ဒါကြောင့်မို့ ဘယ်အသားဘဲချက်ချက် ဆီကိုကောင်းကောင်း သတ်ပေးသင့်ပါတယ်။
နောက်တစ်ခုက ငါးမြင်းက အကြေးခွံမပါဘဲ အရည်ခွံသက်သက်မို့ သူ့ကို မခုတ်မပိုင်းခင် အကောင်လိုက်ကို ဆားသို့မဟုတ် မကျီးသီးမှည့်နဲ့ နယ်ဖတ်ပြီး အရင်ဆေးပေးပါ အချွဲများကုန်သွားစေသလို အညှီနံ့လဲတော် တော် သက်သာစေပါတယ် ပြီးမှငါးကို လိုသလိုခုတ်ပိုင်းပေးပါ။
ဒီနေ့ချက်တဲ့ ငါးမြင်းအချဉ်ချက်လေးအတွက် အရသာနယ်ရန် ပြင်ပါမယ်
အနေတော်တုံးထားသောငါးမြင်း - 300g
အချိုမှုန့်- လက်ဖက်ရည်ဇွန်း တစ်ဝက်သာသာတို့ကို အားလုံးရောနယ်ပြီး ဆယ်မိနစ်လောက်နှပ်ထားပါ
ငရုတ်သီးအရောင်တင်မှုန့် လက်ဖက်ရည်ဇွန်း တစ်ဇွန်းကို ကြက်သွန်ဖြူ အမွှာကြီးကြီး၃မွှာ ချင်း လက်တစ်ဆစ် ကြက်သွန်နီ အနေတော် တစ်လုံး စပါးလင်အရိုး တစ်လက်မလောက်နှင့် ညက်နေအောင်ရောပြီးထောင်းပေးပါ
မကပ်သောအိုးကို မီးအပူပေးပြီးဆီ ထမင်းစားဇွန်း ၃ဇွန်းလောက်ထဲ့ပါ
ငါးမြင်းက အဆီပါတဲ့ငါးဖြစ်တဲ့အတွက် ဆီအများကြီးထဲ့ရန်မလိုပါ
ဆီပူလာတာနဲ့ ထောင်းထားသော ငရုတ်သီးနှင့် အမွှေးနံ့သာများကို ဆီသတ်နံ့သင်းလာအောင် ကြော်ပေးပါ
ဆီသတ်နံ့သင်းလာတာနဲ့အရသာနယ်ထားသောငါးကို ထဲ့ပြီဆီသတ်ပါ ဆီသတ်စဉ် ငရုတ်သီးမတူး စေရန် ငါးအရသာနယ်ထားသော ဇလုံကို ရေနဲနဲနဲ့ကျင်းပြီးထဲ့ပေးပါ
အိုးကို မကြာမကြာလှုပ်ပေးပြီး ငါးအသားများ အရောင်ပြောင်းပြီး မာလာတာနဲ့ မကျီးသီးအနှစ် လက်ဖက်ရည်ဇွန်း တစ်ဇွန်းသာသာနှင့်ရေမြုပ်အောင်ထဲ့ပြီးတည်ပေးပါ
ငါးအသားများ မကြေစေရန် မမွှေဘဲ အိုးကိုလှုပ်လှုပ်ပေးပါ
ရေခမ်းပြီးဆီပြန်ကာနီး နံနံပင်သို့မဟုတ်ရှမ်းနံနံသို့မဟုတ်ကြက်သွန်မိတ်တို့ကို အနေတော်ပိုင်းဖြတ်ကာ အုပ်ပေးပြီး အရသာအတွက် အပေါ့အငံမြည်းပြီး လိုတာပြင်ပေးပါ
ကလေးလူကြီးအကြိုက် ကြက်သားလုံးလေးကြော်ပါမယ် ကြက်သားလုံးကြော်လို့ဆိုပေမဲ့ကြက်ရင်ပုံသား ပေါင်ရင်းသားတွေနဲ့ကြော်ရင် စားလို့မကောင်းပါဘူး ကြက်ပေါင်အသားနဲ့ကြော်မှစားလို့ကောင်းပါတယ်။
ကြက်သားလုံးကို ကြက်ပေါင်ကိုအရိုးထွင်ပြီး ကြိတ်စက်ရှိရင်ကြိတ်စက်ထဲထဲ့ကြိတ် ကြိတ်စက်မရှိရင်လဲ ဓါးနဲ့နုတ်နုတ်စဉ်းပေးပြီး ကြော်တာကပိုပြီးကောင်းပါတယ် ပေါင်သားက အကြောလေးတွေပါတဲ့အတွက် ကြော်ပြီးတဲ့အခါမှာ တထုတ်ထုတ်နဲ့ဝါးလို့ကောင်းတာလေးမို့စားလို့ကောင်းပါတယ်။
ရင်ပုံသားကတော့ အသားများပေမဲ့ ကြော်ပြီးတဲ့အခါမှာ မာကျောကျော ပြင်းတွဲတွဲနဲ့မို့စားလို့ သိပ်မကောင်းလှပါဘူး။
အရိုးထွင်ပြီး ကြိတ်ထားသော ကြက်ပေါင် - 300g
ခပ်နုတ်နုတ်လှီးထားသော ကြက်သွန်နီ - 100g
ဓါးပြားရိုက်ပြီးခပ်နုတ်နုတ်လှီးထားသော ကြက်သွန်ဖြူ - အမွှာကြီးကြီး ၂မွှာ
Cornflour - ထမင်းစားဇွန်း တစ်ဇွန်းမောက်မောက်
ကြက်သားမှုန့် - လက်ဖက်ရည်ဇွန်း တစ်ဇွန်း
ဆီ - လက်ဖက်ရည်အကြမ်းပန်းကန် တစ်လုံး
ဆီမှလွဲရင် အားလုံးရောနယ်ထားသော ကြက်သားကို လက်ကိုရေစွတ်ပြီး အနေတော်လုံးပေးပါ
ဆီပူလာတာနဲ့ မီးအားကိုအနေတော်လျှော့ပေးပြီး လုံးထားသောကြက်သားလုံးကို တစ်လုံးခြင်းထဲ့ကြော်ပေးပါ
နှစ်ဖက်လုံး ရွှေဝါသန်းလာရင် ဆယ်ပြီးဆီစစ်ပေးပါ
ဆီစစ်သွားပါက ကြက်သားလုံးကြော်စိမ့်စိမ့်လေးကို အရသာရှိစွာစားသုံးနိုင်ပါပြီ။
Posted by Tuumar at 10:15 am No comments:
ဒီနေ့တော့ ပျော့ပျောင်းနွဲ့နှောင်းတဲ့ တို့ဟူးကျိုနည်းလေးပြောချင်ပါတယ် မာမာခပ်ငယ်ငယ်လေးထဲက တို့ဟူးကို ကောင်းကောင်းကျိုတတ်ပါတယ် မာမာနဲ့အထက်အောက်မောင်လေးက ငယ်ငယ်လေးထဲက အသားတွေသိပ်စားလေ့မရှိပါဘူး လက်ဖက်သုပ် လက်သုပ်စုံလိုအစာတွေနဲ့ဘဲ စားလေ့ရှိပါတယ်။
သူ့အတွက်ညနေစာကို မာမာတို့နေတဲ့လမ်းရဲ့အနောက်ဖက်လမ်းမှာ အသုပ်ရောင်းတဲ့အိမ်ရှိတော့ မာမာကနေ့တိုင်းသွားသွားဝယ်ရပါတယ် သွားဝယ်တိုင်းနောက်နေ့မနက်ရောင်းဖို့အတွက် တို့ဟူးကျိုတာနဲ့ တိုးတတ်ပါတယ် ငယ်ငယ်ထဲက စပ်စပ် စပ်စပ်နေရာတကာ ပါတတ်တဲ့တွက်ကြောင့် တို့ဟူးကျိုတဲ့ကြီးကြီး မစိန်ကြည်ကိုမေးပြီး နောက်ပိုင်းတော့ အိမ်မှာစမ်းပြီး ကျိုဖြစ်ရင်းက ကျိုတတ်သွားခဲ့တာပါ။
ပဲအစိမ်းမှုန့် - ထမင်းပေါင်းအိုးဆန်ချင်ခွက် ၃ခွက်
ရေ - ထမင်းပေါင်းအိုးဆန်ချင်ခွက် ၄ခွက်ခွဲ
ပဲမှုန့်နှင့်ရေကိုရောကာ ပဲအနှစ်လေးတွေကျေအောင်ချေပြီး ၅နာရီလောက်နှပ်ထားပေးပါ
ပဲမှုန့်ချင်တွယ်ရာမှာ မည်သည့်ခွက်နှင့်ဘဲချင်ချင် ပဲမှုန့်တစ်ခွက်ကိုပဲမှုန့်ချင်သည့်ခွက်နှင့် ရေတစ်ခွက်ခွဲနှင့်ရောပေးရင်ရပါတယ်။
တို့ဟူးကျိုပြီးထဲ့ရန် ဗူးကိုဆီနှင့်နေရာနှံ့အောင် သုပ်ထားပေးပါ
အိုးပူလာပြီဆိုတာနဲ့ ပဲရေစိမ်ထားသော ပဲရည်ကြည်ကို အရင်ဆုံးအိုးထဲသို့ထဲ့ပြီးတာနဲ့ ဆားလက်ဖက်ရည်ဇွန်း တစ်ဝက် နနွင်းမှုန့်လက်ဖက်ရည်ဇွန်း တစ်ဝက် ဆီထမင်းစားဇွန်း တစ်ဇွန်းတို့ထဲ့ကာ နဲနဲလေးပြစ်ရုံကျိုလိုက်ပါ
ပဲရည်ပြစ်လာပြီဆိုတာနဲ့ ကျန်နေသောပဲအနှစ်ကို မကျေသော ပဲအခဲလေးများပါမသွားစေရန် ဇကာခပ်စိတ်စိတ်ခံကာ လောင်းချပေးပါ
ဆီသုပ်ထားသောဗူးထဲသို့ ကျိုထားသောပဲအနှစ်များ လောင်းချပေးပြီး မျက်နှာပြင်ညီအောင်ညှိပေးပါ
နာရီဝက်လောက်နေရင် အေးပြီးခဲနေသာ တို့ဟူးတုန်တုန်အိအိလေးရပါပြီ
သုပ်စား ကြော်စား နှစ်သက်သလိုစားနိူင်ပါပြီ။
Posted by Tuumar at 12:08 pm No comments:
ရံဖန်ရံခါတော့လဲ သတ်သတ်လွတ် ဟင်းအရံလေးတွေ ချက်မိပြန်ပါတယ် မာမာကိုယ်တိုင်က အသားကြီးဘဲ စားရတာမနှစ်သက်တတ်ပါဘူး အသီးအရွက်လိုမျိုးဟင်းတစ်မယ်တော့နေ့စဉ်ချက်တတ်ပါတယ်။
အသီးအရွက်ဆိုတာမျိုးကလဲ ချက်တတ်မှစားကောင်းပါတယ် အခုပဲပင်ပေါက်ပဲပြားကြော်လေးကလဲ ကြော်တတ်ရင်တော်တော်အဆင်ပြေပြီး စားလို့ကောင်းပါတယ် မကြော်တတ်ရင်တော့ ကြော်နေရင်းက ထွက်လာတဲ့အရည်တွေကြောင့် ရေစွတ်ပက်နဲ့စားရတာအဆင်မပြေပါဘူး ဒီနေ့တော့ ပဲပင်ပေါက်ပဲပြားလေးကို အဆင်ပြေပြေစားနိုင်ဖို့ ကြော်နည်းလေးကိုပြောပါမယ်။
ရေစင်အောင်ဆေးပြီးဇကာနှင့်ရေစစ်ထားသော ပဲပင်ပေါက် - 200g
လေးထောင့်အတုံးလေးများ လှီးထားသောတို့ဟူး - တစ်တုံး
ခပ်ပါးပါးလှီးထားသောကြက်သွန်နီ - အနေတော် တစ်ခြမ်း
ဆီကို မီးအနေတော်နဲ့အပူပေးပြီး ဆီပူလာရင်နနွင်းမှုန့်ထဲ့ပါ
ပဲပင်ပေါက်နဲ့အတူ ဆား အရသာမှုန့်တို့ထဲ့ပြီးနှံ့အောင်မွှေပေးပါ
နှစ်မိနစ် သုံးမိနစ်လောက်ကြော်ပေးပြီးရင် သတ်သတ်လွတ်ပဲပင်ပေါက်ကြော်လေးရပါပြီ
Posted by Tuumar at 7:31 pm No comments:
ကော်ပြန့်ကြော်ကြွတ်ကြွတ်လေး ကြော်နည်းလေးကို ပြောပြချင်ပါတယ် အိမ်မှာလတ်လတ်ဆတ်ဆတ် ကြော်စားနိူင်အောင်လို့ပါ။
မာမာကတော့ အသီးအရွက်နှစ်သက်သူမို့ အသားမထဲ့ဘဲ အသီးအရွက်လေးထဲ့ပြီးကြော်ထားပါတယ်
သတ်သတ်လွတ်ကော်ပြန့်ကြော်လေးအတွက် ကြော်နည်းလေး မျှဝေပေးပါမယ်။
ကော်ပြန့် ၁၂လိပ်စာအတွက် ကော်ပြန့်ရွက် - ၁၂ရွက်
အနေတော်လှီးထားသော တရုတ်မုန့်ညှင်း - တရုတ်ဟင်းပြင်ပန်းကန် တစ်လုံးစာ
အနေတော်လှီးထားသော ကြက်သွန်မိတ် - အပင်ကြီးကြီး ၅ပင်
ခပ်သေးသေးအချောင်းလေးတွေလှီးထားသော မုံလာဥနီ - တရုတ်ဟင်းပြင်ပန်းကန် တစ်လုံးစာ
နာရီဝက်လောက်ရေစိမ်ပြီး ခပ်ပါးပါးလှီးထားသော Dired flower mushroom. - ၇ပွင့်
ပဲပင်ပေါက် - တရုတ်ဟင်းပြင်ပန်းကန် တစ်လုံးစာ
ခပ်နုတ်နုတ်လှီးထားသော ကြက်သွန်နီ - တရုတ်ဟင်းပြင်ပန်းကန် တစ်လုံးမရှိတရှိ
ဆား - လက်ဖက်ရည်ဇွန်း တစ်ဇွန်း တစ်ဝက်သာသာ
ဆီကိုမီးအပူပေးပြီး အရင်ဆုံးဆီပူလာတာနဲ့ကြက်သွန်ဖြူဓါးပြားရိုက်ကို အရင်ကြော်လိုက်ပါ
ပြီးတာနဲ့မုံလာဥနီထဲ့ မိနစ်ဝက်လောက်ဘဲကြော်ပြီးတာနဲ့တရုတ်မုန်ညှင်းကိုထဲ့ ပြီးမိနစ်ဝက်လောက်ဘဲကြော်ပါ
ဆား အရသာမှုန်ံတို့ထဲ့ပြီးကြက်သွန်မိတ်ကိုထဲ့ပါ ပြီးတာနဲ့ ပဲငံပြာရည်ကိုထဲ့ပြီး မိနစ်ဝက်လောက်ကြော်ပြီးတာနဲ့ မီးပိတ်ပေးပြီး ကြော်ထားတာတွေကို အအေးခံထားပါ
အအေးခံထားစဉ်မှာ ကြော်ထားစဉ်ထွက်လာသောအရည်များကို အိုးတခြမ်းစောင်းထားပြီး စစ်ပေးထားပါ
ကော်ပြန့်ရွက်ကို ပန်းကန်ပြားတစ်ချပ်ခံပြီးထောင့်ချွန်း ခင်းလိုက်ပါ
အစာခင်းပြီးတာနဲ့ ထောင့်ချွန်းအစကိုအစာပေါ်အုပ်ကာ စပြီးလိပ်ပေးပါ
ပြီးရင်ဘေးနှစ်ဖက်ကို အတွင်းဖက်ကို ခေါက်ပေးပါ
ဘေး၂ဖက်ခေါက်ပြီးတာနဲ့ အရင်ဆုံးလိပ်သလို အဆုံးထိဆက်တိုက်လိပ်ပေးပြီး ကျန်တဲ့ထိပ်စကို ကော်ရည်ကပ်ပြီးလိပ်ပေးလိုက်ပါ။
ဆီ လက်ဖက်ရည်ပန်းကန်တစ်လုံးခွဲကို အပူပေးပါ ဆီပူလာတာနဲ့ မီးကိုအနေတော်လျော့လိုက်ပါ
လိပ်ထားသော ကော်ပြန့်လိပ်များကို တစ်လိပ်ချင်းထဲ့ကြော်ပေးပါ
Posted by Tuumar at 12:17 pm2comments:
ဒီနေ့တော့ ငါးပြားအိုးပူတိုက် အကင်လုပ်နည်းလေး ပြောပြပါမယ် မာမာကတော့ ကိုယ်စားတတ်တဲ့ ငါးဖြစ်တဲ့ ဘာဆာငါးကိုသုံးထားပါတယ် အရိုးမပါသလို ငါးအနံ့လဲမရတဲ့အတွက် စားရတာတော်တော် အဆင်ပြေပါတယ်
ဒီငါးအပြင် တခြားငါးတွေကိုလဲ သုံးလို့ရပါသေးတယ် ကကတစ် ငါးရံ့လိုငါးမျိုးပေါ့နော်။
ငါးကိုအရသာတွေနဲ့နယ်ပြီး တနာရီလောက်နှပ်ထားကာ ကင်လို့အိုးပူတိုက်လို့ကောင်းမဲ့ ဒယ်အိုးမျိုးနဲ့ အိုးပူတိုက်ပါမယ် အိုးပူတိုက်တဲ့အခါမှာလဲ ရိုးရိုးဆီထက် သံလွင်ဆီသုံးတာ ပိုပြီးကောင်းပါတယ် သံလွင်ဆီရဲ့ အရသာကြောင့် ငါးအိုးပူတိုက်အကင်လေးက အရသာတစ်မျိုးနဲ့ ပိုပြီးထူးစေပါတယ်။
အရိုးမပါဘဲအသားလွှာထားသော ဘာဆာငါးပြား - ၂ပြား
ခပ်နုတ်နုတ်စဉ်းထားသောနံနံပင် - အပင်ကြီးကြီး ၂ပင်
ခပ်နုတ်နုတ်စဉ်းထားသော ပူစီနံ - အခက်ကြီးကြီး ၅ခက်
ခပ်နုတ်နုတ်စဉ်းထားသော ကြက်သွန်ဖြူ - အမွှာကြီးကြီး ၂မွှာ
ညက်နေအောင်ထောင်းပြီး အရည်ယူထားသောချင်း - လက်တဆစ်
မညက်တညက်ထောင်းထားသောငရုတ်ကောင်းမှုန့် - လက်ဖက်ရည်ဇွန်း တ၀က်
ကြက်သားမှုန့် - လက်ဖက်ရည်ဇွန်း တဇွန်း
တနာရီလောက်ပြည့်တာနဲ့ပေါင်မုန့်ခြောက် ထမင်းစားဇွန်း ၄ဇွန်းလောက်နဲ့နှံ့အောင်နယ်ပေးပါ
ကင်လို့ကောင်းပြီး မကပ်သောအိုးကို မီးအပူပေးပါ
အိုးပူလာပြီဆိုရင် မီးကို အနိမ့်ဆုံးကိုလျော့ချပေးပြီး သံလွင်ဆီ ထမင်းစားဇွန်း ၂ဇွန်းလောက်ကို အိုးထဲထဲ့ပေးပါ
ဆီငွေ့တက်လာပြီဆိုတာနဲ့ အရသာနယ်ထားသောငါးကို ထဲ့ပြီး ကင်ပေးပါ
တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ကို အကြာကြီးမထားဘဲ မကြာမကြာလှည့်ပေးပါ
ဆယ်မိနစ်လောက် အိုးပူတိုက်ပြီးကင်ပေးပြီးရင် သံလွင်ဆီမွှေးမွှေးနဲ့ ငါးကင်လေးရပါပြီ
Posted by Tuumar at 10:32 am No comments:
ဒီအကြော်လေးကတော့ ၀က်သားအစားကြက်သားနဲ့ကြော်ထားတဲ့ ကြက်စဥကြော်လေးပါ ထမင်းနဲ့စားတာထက်စာရင် ဒီအတိုင်းလေးစားရတာကို ပိုကြိုက်ပါတယ် တစ်နေ့တစ်နေ့ ဟင်းရံစဉ်းစားရတဲ့ ဒုက္ခကလဲမသေးလှပါဘူး မနက်ချက်ရမဲ့ဟင်းကို ညထဲကကြိုပြီးစဉ်းစားရတာကလဲ အိမ်ရှင်မတွေရဲ့ အဓိကတာဝန်တခုပါဘဲနော် ဒီကြားထဲ စိုဖတ်ဖတ်အသားတွေကို မစားချင်တဲ့အခါ အခြောက်အခြမ်းလေးကိုလဲ စဉ်းစားရပြန်တာပါဘဲ ဒီနေ့ကြော်ဖြစ်တဲ့ ကြက်စဥကြော်လေးကို ပြောပြပါမယ်။
အရိုးထွင်ထားသောကြက်ပေါင် - 250g
တန်ပူရာမှုန့် - ထမင်းပေါင်းအိုးဆန်ချင်ဗူး တစ်ဗူး
ဆီ - လက်ဖက်ရည်ကြမ်းပန်းကန် တစ်လုံး
ကြက်သားကိုအရိုးထွင်ပြီး လက်သည်းခွံသာသာ အတုံးလေးများတုံးပါ
ကြက်သားကို ဆား အရသာမှုန့် ချင်း ကြက်သွန်ဖြူတို့နဲ့နယ်ပေးထားပါ
ဖျော်ထားသော မုန့်နှစ်ထဲသို့ ကြက်ဥနှင့်အရသာနယ်ထားသောကြက်သားကိုထဲ့ဖျော်ပေးပါ အရမ်းပြစ်နေရင် ရေနည်းနည်း ထပ်ရောပေးပါ
ဆီကိုမီးအနေတော်နဲ့အပူပေးပါ ဆီပူလာပါက ကြက်သားကို တစ်တုံးခြင်းမုန့်နှစ်ပါအောင် ဇွန်းနှင့် ခပ်ပြီးကြော်ပေးပါ
ဆီစစ်သွားပါက အရသာရှိသော ကြက်စဥကြော်ကို စားသုံးနိုင်ပါပြီ။
Posted by Tuumar at 5:32 pm2comments:
ဒီနေ့တော့ တန်ပူရာမှုန့်နဲ့ ငါးကြော်ကြော်တာလေး ပြောပြပါမယ် ငါးကြီးသက်သက် စားရတာ ရိုးလာပြီဆိုရင်တော့ အခုလိုလေးကြော်ပြီး စားစေချင်ပါတယ် အရသာတစ်မျိုးဆန်းသလို ၀ါးရတာကြွတ်ကြွတ် ရွရွလေးနေသလို မုန့်နှစ်ဖျော်စဉ် ထဲ့လိုက်တဲ့ ချင်း ကြက်သွန်ဖြူအနံ့အရသာတို့ကြောင့် ငါးအနံ့မနှစ်သက်သူတို့ပါ နှစ်သက်ကြမှာပါ။
ဘာဆာငါး - ၃ပြား
တန်ပူရာမှုန့် - ထမင်းပေါင်းအိုးဆန်ချင်ဗူး တဗူး
ရေ. - ထမင်းပေါင်းအိုးဆန်ချင်ဗူး ဗူးတ၀က်သာသာ
ညက်နေအောင်ထောင်းထားသောချင်း - လက်တဆစ်
ညက်နေအောင်ထောင်းထားသောကြက်သွန်ဖြူ - အမွှာကြီးကြီး ၃မွှာ
ဆီ - လက်ဖက်ရည် အကြမ်းပန်းကန် တလုံးခွဲ
ပထမဆုံး တန်ပူရာမှုန့် ရေ ချင်း ကြက်သွန်ဖြူတို့ကိုရောပြီး သမအောင်မွှေပါ
ဆီကိုအပူပေးပြီး ဆီပူလာပါက မီးကိုအနေတော်သို့လျှော့ပေးပါ
မုန့်နှစ်ဖျော်ရည်ထဲသို့ငါးကို အပြားလိုက်နှစ်ပြီး လူးပေးပြီး တစ်ပြားခြင်း ဆီပူထဲမှာထဲ့ကြော်ပေးပါ
တစ်ဖက်ကျက်ရင် တစ်ဖက်ကိုလှန်ပေးပြီး နှစ်ဖက်လုံး ရွှေဝါရောင်သန်းလျှင် ဆယ်ပြီး ဆီစစ်ပေးပါ
ဆီစစ်သွားပါက ချင်းကြက်သွန်ဖြူနံ့ သင်းသင်းမွှေးနေတဲ့ ငါးတန်ပူရာကြော်လေးရပါပြီ။
Posted by Tuumar at 10:37 am No comments:
အခုရက်ထဲ အကြော်လေးတွေတစ်နေ့တမျိုးကြော်စား ဖြစ်နေပါတယ် နေ့လည်နေ့ခင်း အပျင်းပြေလေးဘဲဖြစ်ဖြစ် ထမင်းစားပြီး အချိုတည်းရင်ဘဲဖြစ်ဖြစ် မနက်စောစော အစာပြေစားရင်ဘဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ အရမ်းကိုအဆင်ပြေလွန်းတဲ့ အကြော်လေးပါ ကြော်ရတာအရမ်းကိုလွယ်ပါတယ် စားလို့လဲကောင်းတဲ့အတွက် ကြော်နည်းလေး မျှဝေလိုက်ပါတယ်။
ငှက်ပျောသီး - ၅လုံး
တန်ပူရာမှုန့် - ထမင်းပေါင်းအိုးဆန်ချင်ခွက် တစ်ခွက်
ဆီ - လက်ဖက်ရည်အကြမ်းပန်းကန်လုံး တစ်လုံးခွဲ
ငှက်ပျောသီးကို အခွံနွာပြီး ဖျော်ထားသော မုန့်နှစ်မှာလူးပေးပါ
ဆီကိုမီးအနေတော်နှင့်အပူပေးပြီး ဆီပူလာပါက မုန့်နှစ်လူးထားသော ငှက်ပျောသီးကို တလုံးခြင်းထဲ့ကြော်ပေးပါ
တစ်ဖက်ကျက်ရင် တစ်ဖက်ကိုလှန်ပေးပြီး နှစ်ဖက်လုံးရွှေဝါရောင်သန်းလာပါက ဆယ်ပြီးဆီစစ်ပေးပါ
ဆီစစ်သွားပါက အရသာချိုချိုနဲ့ကောင်းလွန်းတဲ့ ငှက်ပျောကြော်မွှေးမွှေးလေးရပါပြီ။
Posted by Tuumar at 9:47 pm No comments:
Labels: ငှက်ပျောသီး စားဖွယ်ရာများ, အကြော်စုံ စားဖွယ်ရာများ
အရသာထူးကဲတဲ့ ကော်ပြန့်ငှက်ပျောကြော်လေးပါ ကြွတ်ကြွတ်မွှေးမွှေးလေးမို့ မာမာစားလို့ကောင်းတိုင်း မာမာ့blog ကိုလာလည်တဲ့ မိတ်ဆွေတွေကို သတိတရနဲ့ စားစေချင်မိတာအမှန်ပါ ပြင်ရဆင်ရတာလဲလွယ် ကြော်ရတာလဲလွယ်မို့ နှစ်သက်မယ်ဆိုရင် ကြော်စားကြည့်ရအောင် ကြော်နည်းလေး မျှဝေလိုက်ပါတယ်။
ကော်ပြန့်ရွက် - ၅ရွက်
ဆီ - လက်ဖက်ရည်ပန်းကန်လုံး ၂လုံး
အခွံခွာပြီး ထက်ခြမ်းခြမ်းထားသော ငှက်ပြောသီးတစ်လုံးကို ကော်ပြန့်ရွက် အလယ်တည့်တည့်ပေါ်တင်ပါ
အထက်အောက်နှစ်ဖက်ကို ငှက်ပျောသီးအုပ်မိအောင် ခေါက်ပေးပါ
ဘေးနှစ်ဖက်ကို တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက် ထပ်မိအောင်တစ်လွှာစီ အုပ်ပါ
ဆီကိုမီးအနေတော်နဲ့အပူပေးပြီး ထုပ်ထားသောကော်ပြန့် ငှက်ပျောထုတ်ကို ထဲ့ကြော်ပေးပါ
တစ်ဖက်ကျက်ပါက တစ်ဖက်ကိုလှန်ပေးပြီး နှစ်ဖက်လုံျးရွှဝါရောင်သန်းလာရင် ဆယ်ပြီးဆီစစ်ပေးပါ
ဆီစစ်သွားပါက ကြွတ်ရွချိုမွှေးနေတဲ့ ကော်ပြန့်ငှက်ပျောကြော်လေးကို အရသာရှိစွာနဲ့ သုံးဆောင်လို့ရပါပြီ
Posted by Tuumar at 5:42 pm No comments:
ဒီနေ့တော့ ကုန်းဘောင်ကြီးကြော်လေးနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ် ထမင်းမိန်ရာဟင်းလေးပါဘဲ အသားတွေကြီး သက်သက်ဆိုတာထက် အသီးအရွက်လေးပါတော့ အာဟာရလဲပိုပြီးဖြစ်သလို ဟင်းတစ်မယ်ထဲနဲ့ ထမင်းစားလို့ဖြစ်သွားခဲ့တဲ့အတွက် ဟင်းချက်နည်းလေး မျှဝေလိုက်ပါတယ်။
ခပ်သေးသေးအတုံးလေးတွေ တုံးထားသောကြက်သား - 150g
ခပ်သေးသေးအတုံးလေးတွေ တုံးထားသောမုံလာဥနီ - လက်ဖက်ရည်ပန်းကန်လုံး တလုံးစာ
လေးထောင့်အဖတ်လေးတွေ ရအောင်လှီးထားသော ကြက်သွန်နီ - အနေတော် တဥ
လက်တစ်ဆစ်ခန့်လှီးထားသောကြက်သွန်မိတ် - တစပင်
ထက်ခြမ်းခြမ်းထားသော ဘေဘီပြောင်းဖူး - ၅ဖူး
အကြောသင်ထားသော ရွှေပဲသီး - ၁၀တောင့်
နုတ်နုတ်စဉ်းထားထေားသောချင်း - လက်တဆစ်ခန့်
ငံပြာရည် - ထမင်းစားဇွန်း တ၀က်ခန့်
ပဲငံပြာရည်အနောက် - ထမင်းစားဇွန်း တဇွန်း
သကြား - လက်ဖက်ရည်ဇွန်း တဇွန်း
ငရုတ်သီး အခြောက်တောင့် - ၁၀တောင့်ခန့်
ပထမဆုံး ဆီကိုအပူပေးပါ ဆီပူတာနဲ့ ငရုတ်သီးတောင့်တွေကို မွှေးသွားအောင်ကြော်ပြီး ဆယ်ထားပေးပါ ထိုဆီထဲမှာ ဘဲကြက်သားကို ထဲ့ကြော်ပေးပါ
ကြက်သားကို ၃မိနစ်လောက်ကြော်ပြီးတာနဲ့ ရေမြုပ်အောင်ထဲ့ပြီး အဖုံးအုပ်ကာတည်ပေးပါ
ရေခမ်းသွားတာနဲ့ကြက်သွန်ဖြူ နီ ချင်းတို့ကို တမိနစ်လောက်ထဲ့မွှေပေးပါ
ကြက်သွန်မိတ် ဘေဘီပြောင်းဖူး ရွှေပဲသီး ငရုတ်သီးခြောက်ကြော်တို့ထဲ့ပြီးတာနဲ့ ဆား ငံပြာရည် သကြား ပဲငံပြာရည်တို့ကို တစ်ခါထဲ ဆက်တိုက်ထဲ့ပြီးမွှေပေးပါ
ကြက်သွန်များနွမ်းမသွားအောင် မြန်မြန်ကြော်ပြီး မီးပိတ်ကာ အရသာမြည်းပြီး ပန်းကန်ထဲပြောင်းထဲ့ပေးပါ
အရသာရှိစွာ သုံးဆောင်နိုင်သော ကုန်းဘောင်ကြီးကြော်ရပါပြီ။
Posted by Tuumar at 11:32 am No comments:
ဂဏန်းသားလေးတွေကို မဆလာနိုင်နိုင်နဲ့ချက်ဖြစ်ပါတယ် အမြဲတမ်းမဟုတ်ပေမဲ့ တခါတရံတော့ အရမ်းစားလို့ကောင်းပါတယ် မာမာကတော့ ဂဏန်းဆိုရင် ဘယ်လိုချက်ချက် ကြိုက်ပါတယ် အချိုပေါင်းလဲကြိုက်သလို အစပ်ချက်လဲကြိုက်ပါတယ် ဒီနေ့တော့ စပ်စပ်လေးချက်ထားတဲ့ ဂဏန်းဟင်းလေးအကြောင်းကို မျှဝေပေးပါမယ်။
ဟင်းခပ်အမွှေးအကြိုင်အနေနဲ့ ချင်းနဲ့မဆလာကိုဘဲ အဓိကထားပြီး သုံးထားပါတယ် သိပ်အနံ့ပြင်းတဲ့ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်တွေကို မကြိုက်တဲ့အတွက် မာမာသုံးလေ့သုံးထ မရှိပါဘူး ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်တွေကြောင့် စစ်ပွဲတွေဖြစ်ကြမယ်ဆိုရင် မာမာတို့မိသားစု မပါလောက်ဘူးနော် :-D
ဂဏန်းအသား - 250g
ညက်နေအောင်ထောင်းထားသော ချင်း - လက်တဆစ်သာသာ
ငရုတ်သီးမှုန့်. - ထမင်းစားဇွန်း တဇွန်း
မကျီးအနှစ် - လက်ဖက်ရည်ဇွန်း တဇွန်း
ဆီ - လက်ဖက်ရည်ပန်းကန်လုံး တ၀က်သာသာ
နနွင်းမှုန့်. - လက်ဖက်ရည်ဇွန်း တ၀က်မရှိတစ်ရှိ
မွှေးလာတာနဲ့ဂဏန်းသားကို ဆား ငံပြာရည် အရသာမှုန့်တို့ထဲ့ပြီး ဆီသတ်ပေးပါ
ဂဏန်းအသားလေးတွေ အရောင်ပြောင်းပြီး မွှေးလာတာနဲ့ ရေမမြုပ်တမြုပ်ထဲ့ မကျီးနှစ်ထဲ့ပြီး ရေခမ်းအောင်ချက်ပေးပါ
ရေခမ်းသွားပြီဆိုတာနဲ့ အပေါ့အငံအရသာမြည်းပြီးပါက ချင်းမဆလာနံ့သင်းသင်းလေးနဲ့ချဉ်ဖြုံ့ဖြုံ့ ခပ်စပ်စပ် ဂဏန်းအသားဟင်းလေးရပါပြီ။
Posted by Tuumar at 10:47 pm No comments:
အကြော်ဆိုရင် ဘာအကြော်ဘဲဖြစ်ဖြစ် အရမ်းကြိုက်တတ်တဲ့ မာမာတစ်ယောက် ဒီနေ့တော့မြေပဲဇံကြော်လေး ကြော်စားဖြစ်ပါတယ် ကြော်ရတာလဲလွယ်ကူလွန်းတဲ့အတွက် ကြော်စားကြည့်စေချင်ပါတယ် ထမင်းပူပူလေးကို ဆီစမ်းပြီးစားမလား ထမင်းကြမ်းခဲလေးမှာ ဆားလေးပုံပြီး အကြော်တစ်ကိုက် ထမင်းတလုပ်စားမလား အရမ်းကို စားမိန်တဲ့ အကြော်လေးပါ။
မာမာတို့အိမ်မှာ အသားဆိုလက်တွန့်ချင်ကြပေမဲ့ ဒီလိုအကြော်မျိုးဆို ကြော်နေရင်းတောင် ကုန်တတ်တဲ့ သဘောမှာရှိပါတယ် မာမာ မြေပဲ အကြွတ်ကြော်နည်းလေးကို ပြောပြပါမယ်။
နာရီဝက်လောက်ရေစိမ်ထားသော မြေပဲဇံအခြောက် - ထမင်းပေါင်းအိုးဆန်ချင်ခွက် တစ်ဗူး
တန်ပူရာမှုန့် - ထမင်းပေါင်းအိုးဆန်ချင်ခွက် တစ်ဗူး
ရေ - ထမင်းပေါင်းအိုး ဆန်ချင်ခွက် တစ်ဗူးခွဲ မရှိတရှိ
ဆီ - လက်ဖက်ရယ်ပန်းကန်လုံး တစ်လုံးခွဲသာသာ
တန်ပူရာမှုန့် ရေတို့ကို တန်ပူမှုန့်ကြေတဲ့ထိ ရောပြီးဖျော်ပါ
ဖျော်ထားသော မုန့်နှစ်ထဲသို့မြေပဲကို ရောမွှေပေးပါ
ဆီပူလာပါက ရောစပ်ထားသောမုန့်နှစ်ရည်ကို ယောက်ချိုဇွန်း တစ်ဝက်လောက်ခပ်ပြီးထဲ့ပေးပါ
ဆီထဲမှာ အကျက်ညီစေရန် ဖြန့်ပြီးခပ်ပါးပါးထဲ့ပေးပါ
တစ်ဖက်ကျက်ပါက တစ်ဖက်ကိုလှန်ပေးပြီး နှစ်ဖက်လုံးကျက်ပါက ရွှေဝါရောင် သန်းလာလျှင်တယ်ပြီး ဆီစစ်ပေးပါ
ဆီစစ်သွားပါက ကြွတ်ကြွတ်မွှေးမွှေး မြေပဲဇံကြော်လေးရပါပြီ။
Posted by Tuumar at 9:25 pm No comments: